Qalabyada Ganacsiga ee Forex - VPS, Wararka Suuqa & Qalabka Sawirka
Akoon kuu gaara furo Deposit
Ka ganacsiga badeecadaha marginka leh waxaa weheliya khatar sare
Loogu talo galay Masters-ka
Loogu talo galay dadka ku xidhan
Hordhaca Qalabka Ganacsiga
Muuqaalo Ku Sahabsan Sida
30% Abaalmarin Ganacsi
Shaqaalaha FXPRIMUS waa kuwo ku mashquulsan siinta ganacsatada waayo aragnimo ganacsi oo waxqabad fiicni leh taas oo aan lamid ah shirkadaha kale ee dhigeeda ah. Boggan, waxaad ka heli kartaa wax badan oo ku saabsan agabyadeena ganacsi, tiknoolajiyadayada deg degga ah iyo barnaamijyada xoogan, kuwaas oo la isku daray si ay kuu siiyaan khibrad ganacsi oo waxqabad fiicni ku lamaan tahay wakhti kasta oo maalinta ah, meel kasta ood ka joogto daafaha caalamka.
Qalabyada Ganacsadaha (Trader Tools)
Ka faa'iidayso moodhaladii u danbeeyey ee casriga ah si ay kor ugu qaadan khibradaada ganacsi, dhamaan si fudud ayaad uga heli kartaa adoo adeegsanaya barnaamijka MT4. Hel fariimaha maamulaha, terminal yar, aragtida ganacsatada, maamulaha suuq-geytna iyo kuwo kale oo badan, iyadoon la eegayn xajmiga maalgashigaaga ama heerka khibraded ee ganacsigaaga.
BOOQASHADA AGABKA GANACSIGA
La soco wararka ugu dambeeyay ee saameeya suuqyada adduunka. Jadwalkayaga Dhaqaalaha, waxaad awoodi doontaa inaad la socotid dhacdooyinka si sahlan adigoon booqanin shababkado dhawr ah oo aad ku hubiso ilo badan.
Xisaabiyayaasha Ganacsi (Trading Calculators)
Waxaan awood u siineynaa macaamiishayada qalabyo tayo iyo tiro leh si ay u sameeyaan xisaabaad ganacsi ka hor inta aysan galin trade-ka. Ogow hadda xisaabiyeyaashayada bilaashka ah, si ay kaaga caawiyaan inaad u gaarto go'aanno ganacsi adoo adeegsanaya FXPRIMUS, Goobta ugu Ammaansan ee lagu Ganacsado
FXPRIMUS waxay ku faraxsantahay inay u soo bandhigto Platinum API macaamiisheeda qiima leh. Alaabtan gaarka ah waxay siinaysaa galaangal suuq oo toos ah ganacsatada doonaya inay isticmaalaan nidaamka iwaydaarsiga xogaha maaliyadeed (FXI Protocol) ee muhiimka ah waxkabadalida khibradahaaga ganacsi. Macaamiisha waxay heli karaan Platinum API iyaga oo samaynaya dhigaal ah ugu yaraan 50,000 Doolar.
Wax ku Saabsan Platinum API
Signaliska Ganacsiga VIP ah
Hel signalis ganacsi oo sax ah, ogeysiisyo toos ah oo ay ku jiraan isbeddello farsameed, iyo fariimaha kale system-ka, kuwaas oo kugu wargalin doona goobaha gelida iyo ka bixitaanka suuqyada macaashka leh. Akoon kasta oo leh dhigaal isku aruursamay oo ah 10,000 ama ka badan waxa uu si otomaatig ah u heli doona RUKUUMASHO DAA'IN AH signaliska ganacsiga VIPda ah iyada oo loo marayo goobta xubnaha.
Ku ganacso saxnaan, meel kasta oo aad joogtid, adiga oo ku helay fariimaha suuqa SMS. Fariimaha muhiimka ah ee suuqa waxaa si toos ah loogu soo diri karaa moobilkaaga, isla markay dhacaan, si loo hubiyo inaadan waligaa waayin fursad ganacsi.
Active garee Hadda
Waxa Jira Hal Shay Oo La Sameeyo
FURO AKOON HADDA
Ka ganacsiga badeecadaha marginka leh waxa ku jirta khatar sare heer sare oo khatar ah
Kaabayaasha Ganacsiga Caalamiga ah
Kaabayaasha Ganacsiga Caalamiga ah ee FXPRIMUS
Adigoo ka faa'idaysanaya Shirkadda laf dhabarta caalamiga ah ee xoogan Equinix, FXPRIMUS waxay leedaay xarumo xogeed oo ku yaal goobaha muhiimka a ee caalamka siinaya macaamiishooda daahitaanka ugu yar iyo fulinta dhaqso leh oo suurogal ah. Dhamaan xarumaha xogta fiber optic ah ayaa ku xiran servers muhiimka ah ee FXPRIMUS ee yaala meel aan miles badan ka fogayn haayadaha dilaaliinta suuqa samaynta si loo hubiyo in si degdeg ah loo fuliyo.
Khibrad Iskuxiraha La yaabka leh adoo adeegsanaya Akoonka Live-ka Hadda
Ka ganacsiga badeecadaha marginka leh waxa ku jirta khatar sare
- Noocyada Akoonada
- Maalgashiga akoonka
- Biraha qaaliga ah
- Astaamaha Dhicitaanka
- Khubarada Suuqa FX
- Khabiirka Martida
- Hordhaca Dhacdooyinka
- Hordhaca Shuraakada
- Hordhaca Xayeysiisyada
- Su'aalaha Badanaa La Isweydiiyo
- Warqadaha Sharciga
- Nala soo xidhiidh
- Cida aanu nahay
- Soo-bandhigista Shirkada
- Wararka Shirkada
Shabakadani waxa ka shaqeeya Primus Markets INTL LIMITED, xubin ka tirsan shirkada FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS waa magaca ay isticmaasho:
Primus Global Ltd, oo ay sharciyeysay CySEC, oo leh liisan lambarka. 261/14.
Primus Markets INTL Limited, oo ay sharciyeysay VFSC, oo leh lambarka diwaangalinta. 14595
Primus Africa (Pty) Ltd, oo ay sharciyeysay FSCA, oo leh liisan lambarka. 46675.
Digniinta Khatarta: Fadlan ogow in ganacsiga Forex iyo ku ganacsiga alaabaha kale ee la iibsaday ay ku lug leedahay khatar weyn oo aaney ku habooneyn dhamaan maalgashadayaasha. Ku ganacsiga qalabka maaliyadeed waxa ka dhalan kara khasaare iyo sidoo kale faa'ido, khasaarahaaguna wuu ka badan karaa hantidii aad horey u maal gashatay. Ka hor inta aanad sameyn dhaqdhaqaaqyadan, waa inaad hubisaa inaad si dhameystiran u fahantay khataraha ku lug leh oo aad raadisaa talo madax banaan hadii ay daruuri tahay.
Macluumaadkani loolama jeedo ama looguma talo galin u qeybinta ama isticmaalka cida degan wadamo/deegaano gaara oo ay ku jiraan, lakiin aan lagu koobin, Australia, Belgium, France, Iran, Japan, North Korea iyo Mareykanka. Shirkadu ma siiso adeeyadeeda cida degan wadamo/deegaano gaara oo ay ka mid yihiin, lakiin aan lagu koobin, Autralia, Belgium, France, Iran, Japan, North Korea iyo Mareykanka. Shirkadu waxay xaq u leedahay in ay badasho liisanka wadamadan sare iyadoo xor u ah. The Company does not offer its services to residents of certain countries/jurisdictions including, but not limited to, Australia, Belgium, France, Iran, Japan, North Korea and USA. The Company holds the right to alter the above lists of countries at its own discretion.
©2020 FXPRIMUS. Dhamaan Xuquuqda Waa La Dhowray.